हिरासत मोर्चाका तीक्ष्ण अनुभूति – eratokhabar
२०७८, ७ असार सोमबार
हिरासत मोर्चाका तीक्ष्ण अनुभूति
ई-रातो खबर २०७५, १८ कात्तिक आइतबार ११:२२ November 4, 2018 2072 Views
कमरेड किरण राईसमेतका साथीहरूलाई अभिनन्दन गरेपछि पुष्प कोइराला र म एक ठाउँमा बास बसेका थियौँ । त्यही दिन इटहरी बजारबाट दुईजना कमरेडहरू गिरफ्तार भएको सुनियो । उनीहरूलाई हामी बसेको इटहरीको बास थाहा थियो । राती १०ः३० मा आधा घन्टा हिँडेर अर्को घरमा गएर बास बसियो । अर्को दिन स्थानीयसँग राजनीतिक छलफल राखिएको थियो । दुई घन्टा विभिन्न पार्टीका मानिसहरूसँग छलफल भयो । सकारात्मक छलफल भयो ।
त्यो छलफल सकेर हामी देवनारायण मुखियाको घर श्रीपुर, जब्दी टोलमा गयौँ । जब्दी भन्टाबारी नजिकैको गाउँ हो । कोसी बाँध वर–पर भएको कारण त्यस वर–पर भारतीय गुप्तचरको निगरानी हुने नै भयो । भारत–नेपाल नाका भएकाले तस्करी भइरहन्थ्यो । त्यसकारण पनि संवेदनशील थियो । अर्को संयोग त्यसै दिन श्रीपुरमा दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भ्रमण रहेछ । त्यस्ता कुरामा हामी गम्भीर भएनछौँ ।
हामी साथी मुखियाको घरमा गयौँ । तर उनी मुख्यमन्त्रीको कार्यक्रममा गएका रहेछन् । उनी हाम्रो पार्टीका चिनिएका कार्यकर्ता थिए । उनले मेरो घरमा नबस भन्दै अर्को घरमा जान भनेपछि भटभटे त्यहीँ छोडेर उनले भनेको अर्को घरमा गएर बस्यौँ । भट्भटे निगरानी स्थलमा राखेर आपूm मात्र अन्यत्र जानुको त्यति अर्थ हुँदैनथ्यो । हामीले धेरैबेर कुर्नुप¥यो । भोक र पट्यार लागिरहेको थियो । हामी बसेको स्थानमा एमाले पार्टीका मान्छेहरू छलफल गर्न आए । ती राजनीतिक मान्छे नै थिए कि गुप्तचर ? थाहा भएन । महेन्द्रराजमार्गको श्रीपुर चोकस्थित पुष्पकमल होटेलमा खाना तयार गर्न भनी मुखिया कतै गए । केही समयमा नै उनी फर्केर आए अनि आफूले पनि खाना खाए । त्यसपछि इनरुवा जान हतार छ भन्दै सबैको खानाको रकम तिरेर हामीलाई छोडेर गए । हामी चारजना थियौँ । चोकमा समूहमा हिँड्नु उचित नहोला भनेर बिदा भयौँ । म धनुषातिर जान बसको प्रतीक्षा गर्दै थिएँ ।
होटेलबाट अस्थायी प्रहरीचौकी ३ सय मिटरको दूरीमा रहेछ । हामी त्यही बाटो हुँदै बिहान गएका थियौँ । सानो झुपडीमा रहेको प्रहरी चौकी देखिन्नथ्यो । भट्भटे घुमाएर साथीहरू हिँड्नासाथ तीनजना प्रहरी मेरो नजिक आइपुगे । मलाई मुखियाको घरबाटै मनमा चिसो पसेको थियो । आँखा होटेलतिरै थिए । एकजना प्रहरीले होटेलवालासँग केही सोध्यो । होटेलवालाले हातको इसाराले नकारात्मक जबाफ फर्कायो ।
एकजना प्रहरीले ‘तपाईंको झोलामा के छ ?’ भन्यो । मैले झोला खोल्न थाल्दा उनीहरू डराएर अलि पर गए । उनीहरूलाई मेरो हुलिया आइसकेको रहेछ । ‘पहिला झोलावाला मान्छे नियन्त्रणमा लिनू’ भन्ने रहेछ । मैले प्रतिवाद गरेँ । ‘यो बाटोमा कति मान्छे हिँड्छन्, मतलब हुँदैन । तपाईंलाई ल्याउनू भन्ने माथिको आदेश छ, हिँड्नुस’ भन्दै थिए । हामीलाई गिरफ्तार गर्न जब्दी गाउँमै प्रहरी गएको रहेछ । केही मिनेटमै प्रहरीको बाहन आएर मलाई नियन्त्रण गरे ।
मोरङका एकजना साथीलाई आफू गिरफ्तार भएको खबर दिएँ । सुरक्षात्मक उपायहरू गरेँ । त्यही बेला परिवारको फोन आयो । जानकारी गराएँ । त्यसपछि झोला, फोन सबै लुटपाट गरे । सुनसरीको डीएसपीले मानसिक यातना दिन थाल्यो । ‘म मर्न तयार भएर हिँडेको छु, दबाब दिएर के पाउनुहुन्छ !’ भनेपछि ऊ कतै गयो । राति १० बजे हत्कडी लगाएर प्रहरी बाहनमा महेन्द्र राजमार्गबाट उत्तरतर्फ कोसी नदीको किनारैकिनार लगे । ‘कहाँ लग्दै हुनुहुन्छ ?, किन यसो गरेको ? भनेर धेरैपटक सोधेँ तर कोही बोलेनन् । चतारा सडकतिर जंगलको सुनसान बाटो, कोशीको किनार, रातको समय मार्न लगेको त होला भन्ने लाग्यो । डर लाग्यो, घरपरिवार सम्झेँ, साथीहरू सम्झेँ । प्रतिरोध गरेर मर्छु भन्ने लाग्यो । तर हात बाँधेका थिए । त्यतिकै भए पनि एउटालाई त घाइते पार्छु भन्ने लाग्दै थियो । उनीहरू ८ जना थिए ।
चक्रघट्टीको एउटा चिया पसल खोल्न लगाए । सायद त्यो प्रहरीकै हुँदो हो । त्यहाँ ओराले । त्यसबेला रातको १०ः३० भैसकेको थियो । प्रहरी निरीक्षक बल्ल छलफल गर्न थाल्यो । त्यसको छेउमै प्रहरीचौकी रहेछ १० मिनेटजतिको कुराकानीमा उसले पार्टीको प्रशंसा ग¥यो । उसले ‘तपाईंलाई राम्रो ठाउँमा राखौँ, राजनीतिक मान्छे दुःख नहोस् भनेर यतातिर ल्याएको हो’ उसले कूटनीतिज्ञले झैँ प्रहरी कार्यशैलीको बचाउ ग¥यो ।
त्यहाँ नयाँ कैदी, बन्दी आउनासाथ हातगोडा धुन लगाउने र त्यसपछि ‘अनुशासन सिकाउनु प¥यो’ भन्दै लगेर पिटीपिटी निरुत्साहित पार्ने चलन रहेछ । तर नेकपाको कार्यकर्ता भन्ने थाहा पाएका हुनाले मलाई पिटेनन् । त्यसपछि भदौ १९ सम्म हिरासतको दैनिकी चल्यो । एक सातापछि घरबाट परिवार कल्पना लामा भेट्न आउनुभयो ।
भदौ २० गते सदरमुकाम इनरुवा लग्यो । दुई दिन त्यहीँ बस्नुप¥यो । इनरुवा प्रहरी उपरीक्षकले मोबाइलमा केही फोटाहरू देखाएर ‘तपाईंको कमान्ड इन्चार्ज को हो ?’ भनी प्रश्न ग¥यो । मैले किरण राईको फोटो देखाएँ । उसले ‘मलाई ढाँट्ने हो ?’ भन्यो । त्यसपछि उसले ईरातोखबर विद्युतीय पत्रिका खोलेर लेखसहितको फोटो देखाउँदै ‘यो होइन ?’ भन्यो । मैले ‘तपाईंलाई थाहा रहेछ, मलाई किन सोधेको त ?’ भनेँ । त्यसपछि ऊ हाँस्यो र विषयान्तर ग¥यो ।
इनरुवा महिला कक्षको सानो, सास फेर्नै कठिन कोठामा थुनेको थियो । २ हजार धरौटीमा रिहा ग¥यो । त्यहाँ एउटा रसिद दिएर २ हजार लिए । पुनरावेदन अदालत धनकुटा गएपछि थाहा भयो त्यो त नक्कली बिल रहेछ । बिल हेर्दै न्यायाधीशले नक्कली बिल दिएर ठगेको बताए । मलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै इनरुवा चौकीमा कपडा लिन हिँड्नुस् भनेका थिए । परिवारले सञ्चार र अधिकारकर्मी लगाएर मेरो खोजी गरिरहेको कारण हतारहतार अन्यत्र लग्न खोज्दै रहेछ । त्यसपछि गढीमाई चौकीमा लगेर राखे । त्यसपछि धरान, भेडेटार हुँदै धनकुटा लगियो । धनकुटा डीएसपीले ‘नेता हो, तपाईंको पार्टी राम्रो लाग्छ । उनीहरूले जेजे गरे म त्यही गर्दिनँ’ भन्दै हतकडी नलगाई कुराकानी गर्दै धनकुटा पु¥याए । उनी मलाई लिन भेडेटार आएका रहेछन् । उनी पदम राईकै छिमेकी रहेछन् ।
धनकुटामा कमरेड ध्रुव पनि रहेछन् । उनको परिवारमार्फत घरमा सम्पर्क गरेँ अथवा आफू धनकुटा भएको सूचना पठाएँ । मलाई पुनरावेदन अदालतले रिहा गर्न आदेश दियो । बार एसोसिएसनका अध्यक्षले बुझेर लिए । प्रहरी फेरि गिरफ्तार गर्न आयो । उनले बारको सभा कक्षमा लगे । प्रहरीले घेरा हाल्यो । त्यस बेलासम्म थुप्रै साथी अदालतमा जम्मा भैसकेका थिए । कानुन व्यवसायी र प्रहरीको वाक्युद्ध धेरैबेर चल्यो । ‘अदालतको अनुरोध र आदेशमा मैले निर्दोष नागरिकको जिम्मा लिएको छु । तपाईंलाई कानुन तोड्ने अधिकार कसले दियो ?’ बारका अध्यक्ष भन्दै थिए । उनले ‘मलाई पनि लैजानुस्’ भन्दै एसपीलाई हकारे । ‘राजनीतिक घटनाको जिम्मा तपाईंले लिनुहुन्छ ? केही घटना भयो भने जिम्मा लिनुहुन्छ ?’ प्रहरी पनि कस्सिँदै थियो । लामो घम्साघम्सीपछि बन्दुकको अगाडि सबैजना पराजित भए । अदालत निरीह बन्यो । कालो कोट थकित देखियो । मलाई अड्डासार गर्दै इलाम जिप्रका पु¥याइयो । बाटोमा नै तपाईंको अर्को नेता किरण राई पनि पक्राउ परेका छन् भनी प्रहरीले भनेको थियो । प्रहरी बाहनको चालक सीके राउत समर्थक रहेछ । सीके राउत मधेसी जनताको स्वतन्त्रताको घातक हो भनिदिएँ । लामो छलफल गर्ने अवस्था थिएन । तरहरामा २ दिन राखेको थियो । राती १० बजे इटहरी र एक घन्टा बेलबारीमा रोकेका थिए । १२ः३० मा दमक पु¥याए । हरेक चौकीमा पु¥याएपछि फोटो खिच्थे । नयाँनयाँ मान्छे आउँथे, नाम, ठेगाना सोध्थे र जान्थे । सायद उनीहरू भविष्यमा फेरि गिरफ्तार गर्नुपर्दाको तयारी गरिरहेका थिए ।
इलाम प्रहरी हिरासतमा डम्बर र विजय दुईजना साथी थुनिएका रहेछन् । भदौ १३ गते सूर्योदय नपाबाट सौगात, सुमनसहित १० जनालाई गिरफ्तार गरेर ल्यायो । कमान्ड इन्चार्ज त्यहाँ बल्लबल्ल बचेको थाहा भयो । त्यहाँ पनि पुनरावेदन भयो । असोज १७ गते मलाई फेरि रिहा गर्न आदेश भयो । कानुन व्यवसायीले लामो बहस गरेका हुनाले अबेर भयो । अदालतले अबेर पुनः रिहा गर्न आदेश ग¥यो । कमरेड सौगातका भाइले मलाई आफ्नो घरमा लग्नुभयोे । उहाँकी आमा राजनीतिक रूपले सचेत हुनुहुँदोरहेछ । मधेसका आमाहरू कहिले यस्तो सचेत होलान् ? मनमा कुरा खेल्यो । आमामा कम्युनिस्ट आदर्शप्रति अगाध आस्था देखिन्थ्यो ।
असोज १८ गते धनुषा फर्कें । यसबीचमा जेल–हिरासत नै भए पनि म तराईमा नै जान चाहन्थेँ । तर उनीहरू ‘त्यता गर्मी छ, लामखुट्टे, उपियाँ र उडुसले टोक्छ भनेर चिसो ठाउँमा राखेको हो’ भनेर टार्थे । तराईमा प्रभाव विस्तार गर्ला भनेर मलाई तराईमा समातेर पहाडी जिल्लामा थुनिएको थियो । पार्टी, कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी सबैको सहयोगमा रिहा भएर जनताको बीचमा आएको छु । सरकारको दमनकारी नीति असफल भएको छ । जीवन सङ्घर्षमा नौलो अनुभूति र अनुभव भएको छ । यो अनुभव भविष्यको क्रान्ति मार्गमा प्रेरणाको सोत बनिरहनेछ ।
२०७५ कात्तिक १८ गते प्रकाशित
अपर तामाकोसीमा भूमाफियाको चलखेल
जनआवाज नामक मुखपत्र विमोचन तथा दिपावली छठपर्वको शुभकामना आदानप्रदान सम्पन्न
अखिल (क्रान्तिकारी) द्वारा खाद्यान्न र स्वास्थ्य सामाग्री वितरण
पाल्पामा किसान महासङ्घ क्रान्तिकारीद्वारा धान दिवस कार्यक्रम
चितवनमा ४५ औँ जुगेडी सङ्घर्ष तथा किसान दिवस मनाइयो
नेकपा बागमती गाउँ समितिद्वारा २० बोरा मल बरामद
कपिलवस्तुमा धान दिवस कार्यक्रम